24 / 01 / 2021 25 / 01 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1050 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, Lego ရဲတိုက်, Lego Friends, Lego Ninjago, Lego ပင်လယ်ဓားပြများ, ဥပဒေ, LEGOLAND နယူးယောက်, LEGOLAND နယူးယောက်အပန်းဖြေစခန်း, New York , Ninjago
LEGOLAND နောက်ဆုံးပေါ်အပန်းဖြေစခန်းသည်နယူးယောက်ခ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပြီးစီးရန်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှအထင်ကရ ၀ င်သည့်မုတ်ဆိတ်မွေးလမ်းပေါ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။
LEGOLAND နယူးယောက်သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည် Lego ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံတည်နေရာအုပ်စုရဲ့အကွာအဝေး။ အပန်းဖြေစခန်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်းမလွှဲမရှောင်သာရရှိခဲ့သည် နှောင့်နှေး ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကပ်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သော။ ယခုအပန်းဖြေစခန်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် timelapse ဗီဒီယိုအသစ်သည်ပရိသတ်များအားစည်းရုံးနိုင်အောင်ကူညီလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပျက်အောင်ရှေ့ဆက်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းသွားနေပါတယ်! ? အမှတ်တရတွေကိုမင်းနဲ့အတူတည်ဆောက်ဖို့ငါတို့မစောင့်နိုင်ဘူး။#MakeAwesomeHappen #လီဂိုလန်နီ pic.twitter.com/PidJI2sAai
- LEGOLAND New York Resort (@LEGOLANDNewYork) ဇန်နဝါရီလ 14, 2021
အဆိုပါဗီဒီယိုကို LEGOLAND နယူးယောက်ရှိတွစ်တာအပါအ ၀ င်လူမှုမီဒီယာလိုင်းများတွင်တင်ခဲ့ပြီးပန်းခြံသို့ guests ည့်သည်များခရီးသွားမည့်အထင်ကရဝင်ပေါက်မုတ်သုံ ၀ င်သည့်အဆောက်အအုံကိုပြသခဲ့သည်။ အခြား LEGOLAND အပန်းဖြေစခန်းများနှင့်မတူဘဲဤဥယျာဉ်ခေတ်သစ်သည်ဝင်ပေါက်ရှိအုတ်များထက်သာလွန်သည်။ သီးခြားအကြောင်းအရာများနှင့်နယ်မြေများကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဘယ်ဘက်ထိပ်မှာရှိတဲ့မှလွိုက် Ninjago ကနေမင်းသမီး Emma အထက်ထိုင်လျက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် Lego friendsသူတို့နှင့်အတူဗိမာနျတျောနှင့်သစ်တောတည်ဆောက်နှင့်အတူ။ လက်ျာဘက်တွင်ရဲတိုက်မျှော်စင်တစ်ခုသည်ကားဂိုဒေါင်တစ်ဝက်တွင်ရပ်ထားသည့်ကားတစ်စီးပါသောမီးသတ်ဌာနတစ်ခုတွင်ထိုင်သည်။ အလွန်အောက်ခြေတွင်ပင်လယ်ဓားပြတစ် ဦး သည်ငါးဖမ်းကွက်တစ်ကွက်လုပ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤအရာတစ်ခုချင်းစီသည်အပန်းဖြေစခန်းရှိအကြောင်းအရာအလိုက်representativeရိယာ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်သောအပန်းဖြေစခန်းသစ်သည်ယခင်ကမတွေ့ဖူးသည့်အပါအ ၀ င်ဆွဲဆောင်မှု ၅၀ ကျော်ကိုပြသလိမ့်မည် Lego LEGOLAND ပန်းခြံများအတွက်နည်းပညာအသစ်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်စက်ရုံစီး။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ခါနီးတွင်ကြီးမားသော ဆောက်လုပ်ရေး update ကို ပန်းခြံပေါ်စီမံကိန်း၏အတိုင်းအတာနှင့်စကေးပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်ပေးခြင်းရာအရပျကိုယူ။
၏လုပျငနျးကိုထောကျပံ့ဆက်လက် Brick Fanaticsကျေးဇူးပြု၍ ဝယ်ပါ Lego ကနေအစုံ LEGO.com ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO ပရိတ်သတ်များသည်ကြီးမားသော cyberpunk megacity မိုးမျှော်တိုက်နှင့်မြစ်
Lego Brick Sketches သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းညှိခဲ့ကြပြီ →